पार्टीले जिम्मेवारी दिए जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु
राजनीति गर्न आर्थिक पक्ष सवल र सक्षम हुनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सवल भए मात्र राजनीतिमा लाग्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने विष्णुप्रसाद धिताल नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सानैदेखि लागेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि लागेका धिताल आहिले एपेक्स बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । राजनीतिसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत आफूलाई अब्बल व्यवसायीको रुपमा उभ्याईराख्नु भएको धितालले आफूलाई पार्टीले केही जिम्मेवारी दिए जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको बताउँछन् । पार्टीले भूमिका विहिन अवस्थामा राखेर आफूलाई पेण्डुलम जस्तै बनाईरहेको बताउने धितालसँग नेपोलियन चेपाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
– राजनीति गर्नुहुदोरहेछ के छ जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसमा ?
अहिले म नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ताको रुपमा मात्र छु । पार्टीको १३औं महाधिवेशमा प्रदेश नं. ४ को केन्द्रीय सदस्यामा उम्मेदवारी पनि दिएको थिएँ । त्यो चुनावमा थोरै मत अन्तरले पराजित भएँ । त्यसपछि अहिले म पुरै भूमिका विहिन अवस्थामा रहेको छु ।
– पार्टीले के भूमिका दिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ तपाईलाई ?
पार्टीले जुनसुकै भूमिका दिए पनि म त्यसलाई कुशलताका साथ बहन गर्न तयार छु र सक्षम छु भन्न चाहन्छु । मैले पार्टीसँग ठ्यक्कै यहि भूमिका देउ भनेको छैन । जुन भूमिका दिए पनि हुन्छ । तर पार्टीले अहिले मलाई भूमिका विहिन बनाएको छ । यो एकदमै गलत हो भन्ने मेरो ठम्याई रहेको छ । मैले पार्टीसँग कुनै लाभको पद मागेको छैन । मलाई जुनसुकै पद दिए पनि हुन्छ भनेको छु । ताकी मैले पार्टीमा बसेर काम गर्न सकुँ भन्ने मेरो चाहना हो । तर पार्टीले मलाई उचित जिम्मेवरी नदिएकोले मलाई नचिनेको हो की जस्तो लागिरहेको छ ।
– नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा कसरी आउनुभयो त ?
यो पार्टीमा लागेका ३५ वर्ष भयो । मैले २०३८ सालदेखि कांग्रेसको राजनीति गरेको हँु । २०४२ सालमा एसएलसी दिएपछि वकिल बन्ने सपनाले काठमाडौं आएको थिए । त्यसैक्रममा राजनीतिमा पनि सक्रिय हुँदै आएँ । ल क्याम्पसमा पढ्दा म नेविसंघको सचिव थिए । त्यसयता निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय छु । २०४६ र २०६२ सालको आन्दोलनमा म जेल परे । २०६२ सालमा तरुण दलको तर्फबाट आन्दोलनका कमाण्डर थिएँ । म १० वर्ष नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति भएर समेत चलाईसकेको ब्यक्ति हुँ ।
– पार्टीले किन तापाईलाई केही भूमिका नदिएको होला त ?
म मेहेनतमा विश्वास गर्ने र कसैसँग पद माग्न नजाने भएकाले आफू माथिल्लो पदमा पुग्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । यता मलाई स्व. सुशील कोईरालाको मान्छे भन्छन । म त्यो बेला पार्टीको सभापतिको नाताले स्व. कोईरालासँग नजिक थिएँ । म पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा हिड्ने मान्छे । अहिले हाम्रो पार्टीको सभापति शेर बहादुर देउवा हुनुहुन्छ म उहाँको पक्षमा छु । तर मलाई कुनै व्यक्ति विशेषको त्याग भिराएर जुन खालको भूमिका विहिन बनाउने काम भएको छ त्यो अस्वीकार्य काम हो जस्तो लाग्छ । राजनीतिमा बाईपासको राजनीति गरेर कोहीलाई प्लस, माईनस गरेर पार्टीलाई र देशलाई अगाडी बढाउन नसकिने पक्का छ । त्यसैले हामी एक ढिक्का हुनु आवश्यक छ । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु पार्टीले उचित जिम्मेवारी दिए पार्टीको ईमान्दार पहरेदार सिपाहीको नाताले म २४ सै घण्टा काममा लानेछुु ।
– तपाई त राजनीतिसँगै व्यावसाय पनि गर्नुहुन्छ क्यारे ?
हो म राजनीति मात्र गर्दिन व्यावसाय पनि गर्छु । म अहिले एपेक्स डेभपमेन्ट बैंकको अध्यक्ष पदमा पनि रहेको छु । म राजनितिक गर्नलाई आर्थिक पक्ष सवल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ब्यक्ति हुँ । नेपालमा धेरै नेताहरु पैसा मागेर राजनीति गर्छन् । तर राजनीति गर्न सँगै विभिन्न पेशा र व्यवसाय गर्नु आवश्यक रहेको छ । त्यसको लागि देश मै केही गर्न चाहनेहरुका लागि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यसैकारण पनि मैले सानो कामबाट मेहेनत गर्दै अहिले एपेक्स विकास बैंकको अध्यक्षको रुपमा काम गरिरहेको छु ।
– यो अवस्थामा आईपुग्न त संघर्ष धेरै गर्नुभयो होला ?
कलेज पढ्दा मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । त्यहीबेला मलाई जापान जाने प्रस्ताव आएको थियो । जापान गएर छिट्टै पैसा कमाउन सक्थे । तर मैले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरी देशमै संघर्ष गरेर केही गर्ने संकल्प लिए । त्यही संकल्प लिएर मेहेनत गर्दा आज यो अवस्थामा आईपुगेको हुँ । वकिल बन्ने सपना बोकेर काठमाडांै आएको थिएँ । तर, वकिल पास गरिसकेपछि पैसा कमाउन ५÷६ वर्ष लाग्ने अवस्था थियो । त्यसपछि मैले कलेज पढाउन थाले । कलेज पढाएको पैसा काठमाडौंमा खान बस्न मात्र पुग्थ्यो । देशमै केही गर्ने सोच ममा थियो । केही समय निजी कम्पनीमा पनि काम गरे । त्यही जागिरको पैसा जम्मा गर्दै मैले ऋण थपेर २०५४ सालमा एउटा सफा टेम्पो किने । ‘साथीभाइहरुसँग सरसापट गरेर टेम्पो किनेको थिए । टेम्पाबाट मासिक २०÷२५ हजार रुपैयाँ कमाई हुन थाल्यो, त्यही पैसाबाट लगानी थप्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । आज म सफा टेम्पो व्यवसायीको अध्यक्ष मात्र होइन, एकजना सफल युवा व्यवसायी र नेताको रुपमा पनि आफ्नो पहिचान र भविष्य बनाइरहेको छु ।
– बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी प्रबेश गर्नुभयो त ?
मैले पहिले रारा बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुँ । जुन बैंक मर्जरबाट एपेक्स विकास बैंक बनेको हो । तर बैंकको अवस्था राम्रो थिएन । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १२ करोड नोक्सान बेहोरोको थियो । त्यसपछि मलाई चित्त बुझेन । गत वर्ष भदौमा म बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएँ । म अध्यक्ष भएपछि बैंकको कायापलट भएको मैले महशुस गरेको छु । गत वर्ष १२ करोड नोक्सान भएको बैंकले यो वर्ष १० करोड भन्दा धेरै मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । खराब कर्जाका कारण बैंकको अवस्था बिग्रिएको थियो । म बैंकको अध्यक्ष भएलगत्तै मैले व्यवस्थापनमा ठूलो हेरफेर गरे । सिईओसहित केही कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिए । त्यसपछि नयाँ टिम लिएर मैले बैंकलाई नयाँ गतिमा अघि बढाएँ । ऋण नतिर्ने कतिपयलाई बाथरुममा समेत थुनेँ । कतिपयले त गुण्डाहरुको धम्की पनि दिए, तर म डराइनँ, त्यसपछि धेरैले कर्जा तिरेका छन् । मर वा गरको अवस्थामा आफू अध्यक्ष भएकाले आफूले त्यहीअनुसार काम गरेकाले अहिले बैंकको अवस्था राम्रो भएको जस्तो लाग्छ । व्यक्तिगत पैसा नभई जनताको पैसा भएकाले आफूहरुले उनीहरुको हितको लागि बैंकिङ सुशासन र संस्थागत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएर मैले बैंकमा सुधार गरेको हुँ । अहिले बैंकमा करिव सात अर्ब निक्षेप छ भने करिव ६ अर्ब कर्जा छ ।
– बैंक मर्जरको कुरा पनि आएको छ नि ?
हो अब हामी मर्जरको तयारीमा रहेका छौं । अब एपेक्स, सुप्रिम, ईन्फ्रास्नस्टक्चर, एनसिसीलगायतका बैंकहरुसँग मर्जर गरी एनसीसी एउटा ठूलो बैंक बन्दैछ । मर्जरपछि हामीहरु केही महिनाभित्रै एकीकृत कारोबारको तयारी गरिरहेका छौं । मर्जर भएपछि ठूलो लगानी हुने र बैंकको प्रशासनिक खर्च धेरै घट्ने भएकाले यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो हुने मैले आशा राखेको छु् । संभवतः असोज मसान्तबाट हाम्रो कारोबार पनि सुचारु हुन्छ होला । हामीले धेरै नाफाभन्दा पनि मुलुकको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बैंकहरुले काम गर्छौं । कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले धेरै लगानी गर्नुपर्छ । देशको समृद्धिमा बैंकहरुको ठूलो भूमिका छ । सरकारले पनि ग्यारेन्टी बसेर युवाहरुलाई कर्जा दिई विभिन्न उद्यममा लगाउनुपर्छ । सानो कामबाट सुरु गरेर मेहेनत गरे सफलता पाउन गाह्रो हुन्न भनेर हामीले यो नीति अवलम्बन गरेका हौ ।
अन्त्यमा राजनीति गर्न हरेक ब्यक्तिले आफ्नो आर्थिक अवस्था सवल बनाउनको लागि पनि लाग्नुपर्छ भन्छु । राजनीति पेशा मात्र नभई यो समाज सेवा पनि हो भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएकोले सेवा गर्नको लागि आफै पनि अलि बलियो हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु । त्यसको लागि राजनीतिक, व्यवसाय र समाजसेवा तीनै कुरालाई सँगै अघि बढाउनुपर्छ । राजनीतिले हामीलाई व्यवसायमा मात्र नभई जीवन जिउने कला पनि सिकाउछ । राजनीतिले हामीलाई मान्छेहरुसँग कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कला सिकाउछ जुन व्यवसायमा पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ भन्ने कुरालाई साथसाथै लैजादा जीवनमा सफलता मिल्छ भन्न चाहन्छु ।